Ciidanka bilayska ee magaalada Boosaaso oo hawlgallo af fuliyeen ku qabtay dad lagu tuhmay falal dambiyeedyo. – Radio Daljir
Bossaso, Dec 09 – Hawlgallo dad lagu soo qabtay ayaa ciidamada bilayska ee magaalada Bossaso waxaa ay ka sameeyeen xaafado ka mid ah magaalada Bossaso.
Kadib markii xalay fiidkii qarax miino lagu dilay askar ka tirsan ciidamada bilayska ee magaalada Bossaso oo uu ku jiray taliyihii bilayska ee xaafada Baalade ee magaalada Boosaaso Xuseen Cali Dheere ayaa ciidamada amaanka ee Puntland hawlgallo ay ka sameeyeen xaafadda New Bossaso oo ahayd xaafadda uu qaraxa ka dhacay waxaa ay ku soo qab qabteen ku dhwaad 10 dhalinyaro ah oo 5 ka mid ah ay ahaayeen sida la sheegay dhalinyaro kasoo jeeda gobolada Koofureed ee Somaliya.
Qaraxa miino oo xalay ka dhacay xaafadda New Boosaaso ayaa waxaa ku dhintay 4 qof oo 3 ka mid ah ay ka tirsanaayeen ciidanka bilayska ee Puntland, kuwaasi oo uu ku jiray taliyihiin ciidanka bilayska ee xaafada Baalade ee magaalada Bossaso; waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 5 qof oo qaar laga dayriyeye xaaladooda caafimaad.
Ciidan aad u fara badan oo ka tirsan kuwa bilayska, kuwa gaashaaman gadiidka dagaal ayaa lagu arkayo wadooyinka iyo xaafadada magaalada Bossaso.
Inkasta oo howlgaladani ay socdaan, isla markaana lagu qabtay dad fara badan ayaa hadana Issimada iyo nabadoonada gobolka Bari ayaa bogaadiyey hawlgallada amni ee ay ciidanku wadaan, uguna baaqay shacabkau in ay gacan ku siiyaan ciidanka suggida amniga; waxaa ay sidoo kale ugu baaqeen mas’uuliyiinta maamulku in aan la bartilmaameedsan oo keliya dhalinyarada ka soo jeeda gobolada Koofureed ee Somaliya, balse la qabto cid kasta oo lagu tuhmo falal dambiyeed ka dhan ah amniga.